OST PST Converter. Shandura OST kuPST.
DataNumen Exchange Recovery ndiro yakanakisisa OST kuPST inoshandura uye OST kupora chishandiso munyika. Kana dambudziko rikaitika paMicrosoft Exchange server, senge sevha kubondera, server database huori, nezvimwe. DataNumen Exchange Recovery Unogona kushandisa matekinoroji epamberi kuongorora nherera kana huwori Shanduro isina kufanira faira (.ost) mafaera pakombuta yekombuta, dzosa iwo mameseji etsamba uye zvimwe zvese zvinhu zveakaundi account yako sezvinobvira, uye wozvishandurira kuAptlook pst mafaera kuti uwane nyore.
Cherechedza: Zve Outlook PST yekugadzirisa faira uye kupora, ndapota shandisa DataNumen Outlook Repair.
4.90 / 5 (kubva 1,619 mavhoti)
Sei DataNumen Exchange Recovery?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kweiyo OST kupora uye OST kuPST kutendeuka chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen Exchange Recovery ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen Exchange Recovery inoputa kukwikwidza
Yako Shanduro yekudzosa software inoshamisa uye inoshanda senge champ. Ndatenda.
Dai 9th, 2020
DataNumen chishandiso chakashanda zvakakwana, rakaita basa randaida kuti riitwe. A + Chigadzirwa ndatenda.
Ndinoda kukutendai zvikuru nekuita kuti zvikwanise kudzoreredza bhokisi reemail iro ramunofunga nezvaro lost, ine DataNume Shanduro Yekudzosera
Ndinoda kukutendai zvikuru nekuita kuti zvikwanise kudzoreredza bhokisi reemail iro ramunofunga nezvaro lost, ine DataNume Shanduro Yekudzosera software.
Congratulations to DataNumen Chikwata!
Ini ndanga ndichida kungoti maita basa nekupa chirongwa ichi. Ini ndangoishandisa kushandisa zvinobudirira kushandura hombe OST faira iri kunditendera kuti ndipore
Ini ndanga ndichida kungoti maita basa nekupa chirongwa ichi. Ini ndangoishandisa kushandisa zvinobudirira kushandura hombe OST faira iri kunditendera kuti nditore 150 maemail akashaika
Yakaita basa rakakura, uye ndinofara kwazvo.
Ndokutenda zvikuru. Ndinovimba iwe unazvoost zuva rakanaka, uye vhiki yakakosha !!
Dai 10, 2019
Nenzira, tinotenda zvikuru rubatsiro rwako. Takaita sarudzo yekutenga Datanumen Exchange Recovery chishandiso nezuro, uye chimwe chezvinhu zvatakateya
Nenzira, tinotenda zvikuru rubatsiro rwako. Takaita sarudzo yekutenga Datanumen Exchange Recovery chishandiso nezuro, uye chimwe chezvinhu zvatakatarisana nesarudzo yedu yaive yehunyanzvi sevhisi sevhisi iyo yawakapa isu patanga tichiyedza.
Ichi chishandiso chakabatsira kwazvo! Ndakaedza imwe software yakafanana asi iyi inoita hunyanzvi hwekudzoreredza E-mail dzangu dzese kubva OST ikwidzwe.
Ini ndanga ndichida kungoti imi varume ndidzo dzakanakisa ...
Unokosheswa zvikuru! Iye zvino ini ndinogona kuwana yangu yekarenda info kubva kune isiriyo setup OST (ndinofanira kuva
Unokosheswa zvikuru! Iye zvino ini ndinogona kuwana yangu yekarenda info kubva kune isiriyo setup OST (ndinofanirwa kunge ndaive neruzivo rwekarenda rwakakamurwa kuita pst pachinzvimbo chekuisirwa mukati ost)
Ndatenda zvakare uye uve nezuva rakanaka!
Iwe uri kuponesa zuva rangu. Chinhu chipi zvacho chandaida - kungoshandura 2 OST mafaira. Chirongwa chako chete ndicho chinoita izvi. Ndotenda zvikuru!
Ichi chidimbu chikuru che software. Yakawana yakatyoka OST faira kekutanga uye ichibva yavhura kekutanga muAptlook 2019. Ini ndanga ndayedza 3 imwe
Ichi chidimbu chikuru che software. Yakawana yakatyoka OST faira kekutanga uye ichibva yavhura kekutanga muAptlook 2019. Ini ndanga ndaedza matatu mamwe mapande ekugadzirisa software ndisina kubudirira uye ndanga ndoda kutambira tsamba yekare yaive lost. Kutenda mirwi DataNumen! ????
ex CIO, ikozvino yaenda pamudyandigere
Chigadzirwa chako chakaita zvese zvaifanirwa kuitwa. Kuwanazve yangu email data faira rakandiponesa.
Ini ndichave ndichikurudzira chigadzirwa chako kune chero munhu anoda
Ini ndichave ndichikurudzira chigadzirwa chako kune chero munhu anochida, uye zvechokwadi kana ndichichiida, ndichachiisa zvakare.
Mushure mekutsiva yangu pache PC, ini ndaida kudzoreredza wega kushandisa yekare UST faira kuichinjira kuPST. Pakati pezvakawanda zve softwares, ini ndine
Mushure mekutsiva yangu pache PC, ini ndaida kudzoreredza wega kushandisa yekare UST faira kuichinjira kuPST. Pakati pezvakawanda zve softwares, ini ndawana DEXR.EXE inoenderana chaizvo nechinangwa changu. Ipo iyo UI ichitaridzika kuve yakapusa, DEXR yakakwanisa kudzoreredza ese maemail, mahofisi uye mapoka ekubatana asina zvikanganiso. Ini ndinochengeta mupfungwa DATANUMEN yezveramangwana sereferenzi Brand yekudzosera data
Mushure memaawa anopfuura gumi enguva yekushandira yakatambiswa kudzidzisa MS pane dambudziko iri pandakavandudza yangu Outlook 10 kusvika 2010 uye autogeneration ye
Mushure memaawa anopfuura gumi enguva yekushandira yakatambiswa kudzidzisa MS pane dambudziko iri pandakavandudza yangu Outlook 10 kusvika 2010 uye autogeneration yemutiple.ost mafaira ini ndakazosiya. pavakandiudza kuti havagone kuvhura iyo yekutanga.ost faira. Ini ipapo ndakawana yakajeka zano rekuita nekukurumidza kutsvaga pa.ost ku .pst kutendeuka uye boom - 3.8GB yedata yainyanya kukosha kwandiri yakanga yadzoka mumaoko angu - zvese izvi mushure mekutsigirwa kweMS yepamusoro tier yeAptlook vakati hapana zvavaigona kuita. Ini ndiri kure nekombuta geek asi kana iwe uchiziva zvakawanda kupfuura tech tsigiro rep iwe unofanirwa kuziva nekukurumidza kuti uri mudambudziko. Inoshanda ...
RJ Collins Muvambi V360
Dai 15th, 2015
Mhinduro Yekutevera Zvakajairika Zvikanganiso uye Matambudziko Mukuchinjana OST faira
Shanduro iri Parizvino muKudzorera Mode
Zvikanganiso Zvaigona Kuonekwa mufaira
Iyo Faira Haisi Yekunze Folda Faira
Oversized OST Dambudziko refaira
Delete Exchange Objects neMistake
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Exchange Recovery v8.5
Tsigira Shanduro 5.0 kusvika 2019.
Tsigira Outlook 97 kusvika 2019 uye Outlook yeHofisi 365.
tsigira OST mafaira akagadzirwa neShanduro ActiveSync.
Tsigiro yeWindows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 uye Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019. Ese ari maviri masystem e32bit uye 64bit anoshanda anotsigirwa.
Kutsigira kudzoreredza tsamba mameseji, maforodha, posts, makarenda, kugadzwa, zvikumbiro zvemisangano, vanofambidzana, zvinyorwa zvekuparadzira, mabasa, zvikumbiro zvebasa, majenali uye manotsi mu OST mafaira. Zvese zvivakwa, senge chidzidzo, kuenda, kubva, cc, bcc, zuva, nezvimwe, zvinowaniswa
Tsigiro yekudzosera mameseji meseji yakajeka, RTF uye HTML fomati.
Tsigiro yekudzoreredza zvakabatanidzwa, kusanganisira zvinyorwa nemifananidzo zvakanamatira kumeseji uye zvakamisikidzwa mumitumbi yeHTML.
Tsigiro yekudzosera zvakadzamidzirwa zvinhu, senge imwe meseji, Excel Mashandiro, zvinyorwa zveIzwi, nezvimwe.
Zvinhu zvakadzorerwa zvinochengetwa uye zvinoshandurwa kuita wega mafaira (PST) mafaera anogona kuwanikwa zviri nyore neMicrosoft Outlook uye nevamwe vanoenderana tsamba vatengi.
Tsigiro yekudzosera zvinhu zvakabviswa muExchange mailbox, inosanganisira tsamba dzetsamba, maforodha, posts, makarenda, kugadzwa, zvikumbiro zvemisangano, vanofambidzana, zvinyorwa zvekuparadzira, mabasa, zvikumbiro zvebasa, majenali uye manotsi.
Tsigiro yekushandura OST kuPST mafaera nekukurumidza uye zvine mutsindo.
Tsigiro yekudzosera yakanyanya 2GB OST mafaira.
Kutsigira kuti uwanezve OST mafaera akakura se16777216 TB (kureva 17179869184 GB).
Tsigiro kupatsanura chinobuda PST faira mune akati wandei madiki mafaera.
Tsigiro yekudzosera password yakachengetedzwa OST mafaera, ese ari maviri anomanikidzwa kunyorera uye akanyanya kunyorera (kana akanyanya kunyorera) anotsigirwa Iyo OST faira rinogona kudzoserwa kunyangwe iwe usina password.
Tsigiro yekugadzira yakatarwa PST faira mune Outlook 97-2002 fomati, Outlook 2003-2019 fomati, uye Outlook yeHofisi 365 fomati.
Kutsigira kuti uwanezve OST faira faira kubva kune isina kukuvara kana kukuvara VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) mafaera (*. vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) mafaera (*. vhd), Acronis True Image mafaera (*. tib), Norton Ghost mafaera (*. gho, * .v2i), Windows NTBackup mafaera (*.bkf), ISO mafaera emifananidzo (*. Iso), Disk mafaera emifananidzo (*. Img), maCD / mafaera emufananidzo eDVD (*. Bin), Doro 120% Mirror Disk Faira (MDF) mafaera (*. Mdf) uye Nero mafaira emifananidzo. (* .nrg).
Tsigiro yekugadzirisa uye kushandura OST mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa uye kushandura batch ye OST mafaira.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo OST mafaira kuti agadziriswe pakombuta yemutengi.
Tsigiro yekuchengetedza yakadzoreredzwa PST faira chero nzvimbo, kusanganisira netiweki dzakabatanidzwa nemadrive anozivikanwa nekombuta yemuno
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa iyo OST faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
kushandisa DataNumen Exchange Recovery Kuchinja OST kuPST Mafaira
Kana dambudziko rikaitika paMicrosoft Exchange server, senge sevha kubondera, server dhata huwori, nezvimwe, iyo Shanduko isingaenderane folda (.ost) mafaera pakombuta yekombuta ichine mameseji etsamba uye zvimwe zvese zvinhu zveakaundi Exchange tsamba account. Unogona kushandisa DataNumen Exchange Recovery kushandura iyo OST mafaera kuPST mafaera kuitira kuti iyo data iri mukati memafaira iwanikwe muMicrosoft Outlook.
Zvakare, kana iwe ukasangana nezvakasiyana zvikanganiso uye matambudziko ne OST mafaera, senge huori hwe data, zvikanganiso zvekuenderana, kudzima maemail nekukanganisa, kuwanda 2GB OST faira dambudziko, nezvimwe, iwe unogona kugara uchishandisa DataNumen Exchange Recovery kudzoreredza data kubva ku OST mafaera uye nekushandura iwo PST fomati.
Cherechedza: Usati washandura iyo OST faira ne DataNumen Exchange Recovery, ndapota vhara chero mamwe mapurogiramu anogona kuwana kana kugadzirisa iyo OST faira. Zvakare ndapota vhara Microsoft Outlook.
Kana iwe uchiziva iyo Outlook vhezheni yesosi OST faira kuti igadziriswe, ipapo unogona kudoma mubhokisi re combo parutivi peiyo sosi faira hodhi bhokisi, zvinogona mafomati ari Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010, uye Outlook 2013-2019 / Hofisi 365. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Determined", ipapo DataNumen Exchange Recovery ichaongorora sosi OST faira kuti uone fomati yayo otomatiki. Nekudaro, izvi zvinotora imwe nguva.
DataNumen Exchange Recovery ichachengeta iyo yakashandurwa dhata sefaira nyowani muAptlook PST fomati kuitira kuti iwe ugone kushandisa Microsoft Outlook kuvhura uye kuona zvinhu zvakashandurwa. Uye nekukanganisa, iro nyowani zita refaira ndere xxxx_recovered.pst, uko xxxx ndiro zita reiko OST faira. Semuenzaniso, for source OST faira Chinyorwa.ost, iyo default inoshandurwa faira ichave Source_recovered.pst. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Unogona kuisa zita rakashandurwa refaira zvakananga kana tinya iro bhatani rekutarisa uye sarudza iyo yakashandurwa faira.
Unogona kusarudza fomati yeiyo yakashandurwa PST faira mubhokisi re combo padivi peiyo yakashandurwa faira yekugadzirisa bhokisi, mafomati anokwanisa ari Outlook 97-2002 uye Outlook 2003-2019 / Hofisi 365. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Determined", ipapo DataNumen Exchange Recovery ichagadzira iyo yakashandurwa PST faira inoenderana neAptlook yakaiswa pakomputa yemuno.
Baya bhatani, uye DataNumen Exchange Recovery kuda start kutendeuka kubva kunobva OST faira kuPST faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekushandurwa maitiro, kana chero data rikakwanisa kushandurwa zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura iyo yakashandurwa PST faira neMicrosoft Outlook uye uone zvinhu zvakashandurwa. Ndokumbira utarise DataNumen Exchange Recovery ichaedza kuisa zvinhu zvakashandurwa mumaforodha avo epakutanga. Nekudaro, kune iyo lost & vakawana zvinhu, vanozotorwa voiswa mumafaira akasarudzika seRecovered_Group1, Recovered_Group2, nezvimwe.
ChiSpanish, ChiFrench, ChiGerman, ChiItaly, ChiPutukezi, ChiRussian, ChiJapanese, ChiKorea uye ChiChinese chakareruka
DataNumen Exchange Recovery 7.8 inoburitswa muna Zvita 10, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.6 inoburitswa muna Gumiguru 31, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.5 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 19, 2020
Bvisa zvinhu zvisina basa.
DataNumen Exchange Recovery 7.2 inosunungurwa munaJune 21, 2020
Natsiridza kuenderana kweshanduro ye64bit.
DataNumen Exchange Recovery 7.1 inoburitswa muna Kukadzi 8, 2020
Deredza ndangariro dzinoshandiswa mukugadzirisa.
DataNumen Exchange Recovery 6.9 inoburitswa muna Gumiguru 3, 2019
Natsiridza yekutsvaga basa.
DataNumen Exchange Recovery 6.8 inoburitswa muna Chikunguru 8th, 2019
Bvisa kusawirirana mune yakamisikidzwa PST faira.
DataNumen Exchange Recovery 6.5 inoburitswa muna Ndira 24, 2019
Tsigira Exchange Server 2019 uye Outlook 2019.
Auto bvisa zvinhu zvisina basa.
DataNumen Exchange Recovery 6.0 inoburitswa munaNovember 12th, 2018
Natsiridza kupora kwemahombekombe mafaira.
Ipa kumwe kutonga pamusoro pekupora danda.
DataNumen Exchange Recovery 5.6 inoburitswa munaGunyana 21th, 2018
DataNumen Exchange Recovery 5.5 inoburitswa muna Kubvumbi 28, 2018
Tsigira Shanduro Server 2016, Outlook 2016 uye Hofisi 365.
Natsiridza mashandiro eiyo 64bit vhezheni.
DataNumen Exchange Recovery 5.0 inoburitswa muna Chikunguru 29th, 2015
Tsigira 64bit Outlook.
Tsigiro yekuwanazve zvisiri izvo data chunks.
Kutsigira kudzora kuti uwanezve zvakabviswa, zvakavanzika kana lost ndokuwana zvinhu.
Tsigiro yekugadzirisa "Haikwanise kufambisa zvinhu" kukanganisa mukati OST mafaira.
DataNumen Exchange Recovery 4.5 inoburitswa muna Chikumi 12, 2014
Tsigiro yekudzosera Outlook 2013 OST mafaira.
DataNumen Exchange Recovery 4.0 yakaburitswa muna Kubvumbi 29, 2014
Kutsigira kuti uwanezve OST faira faira kubva kune isina kukuvara kana kukuvara VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) mafaera (* .vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) mafaera (* .vhd), Acronis True Image mafaera (* .tib), Norton Ghost mafaera (* .gho, * .v2i), Windows NTBackup mafaera (*.bkf), ISO mafaera emifananidzo (* .iso), Disk mafaera emifananidzo (* .img), maCD / mafaera emifananidzo yeDVD (* .bin), Doro 120% Mirror Disk Faira (MDF) mafaera (* .mdf) uye maNero mafaera emifananidzo. (* .nrg).
DataNumen Exchange Recovery 3.5 yakaburitswa muna Ndira 20, 2014
Deredza kushandiswa kwekurangarira panguva yekudzoreredza.
DataNumen Exchange Recovery 3.0 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 12, 2010
Kuvandudza mashandiro einjini yekudzorera.
Natsiridza kukanganisa kwekutsvaga uye kugadzirisa mashandiro.
Natsiridza yekufambira mberi kubhawa kuratidza kupora kufambira mberi nenzira kwayo.
Tsigira Microsoft Exchange 2010 uye Outlook 2010.
DataNumen Exchange Recovery 2.5 inoburitswa munaKurume 24, 2010
Kuvandudza scan uye yekumhanyisa kumhanya.
Kudzivirira kupora zvakapetwa zviri mukati mukutora maitiro.
Tsigiro yekudzosera akawanda zvivakwa zvechinhu mubatch.
Tsigiro yekudzosera uye kushandura akawanda-akakosha zvivakwa.
Natsiridza kuenderana pane Windows 9x masisitimu.
DataNumen Exchange Recovery 2.0 inoburitswa muna Zvita 29, 2008
Tsigira Microsoft Windows Vista.
Tsigira Microsoft Outlook 2007 uye Exchange 2007.
Gadzirisa iyo bug mukugadzirisa mameseji makuru.
DataNumen Exchange Recovery 1.1 yakaburitswa muna Mbudzi 10, 2006
Kuvandudza iko iko kwekupora.
Tsigira akati wandei epamberi ekudzoreredza nzira.
DataNumen Exchange Recovery 1.0 yakaburitswa muna Ndira 1, 2006
Chishandiso chine simba chekuwanazve nherera kana huori Microsoft Exchange isinga chengeteke (.ost) mafaera
Tora lost Outlook data, inosanganisira maemail uye zvimwe zvinhu kubva kune yakasviba disks kana dhiraivha
Tora maemail AKADZIDZWA kubva Outlook Express dbx mafaera.